Wasaaradda Difaaca Dalka Oo Ka Digtay In La Iibsado Hantida Ciidanka | Radio Muqdisho	Tuesday, May 21st, 2013	Bogga Hore
Wasaaradda Difaaca Dalka Oo Ka Digtay In La Iibsado Hantida Ciidanka
Published on October 17, 2012 by Canab · 7 Comments · 2,003 views
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa uga digtay dadka Soomaaliyeed in ay iibsadaan xeryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ,iyadoo dhanka kalena ugu baaqday hay’adaha garsoorka dalka in ay gacan ka gasytaan sidii looga hortagi lahaa falalkaasi lagu boobayo hantida Qaranka.
Wasiiru dawlaha wasaaradda difaaca Soomaaliya Maxamuud Macalim Nuur oo maanta shir jaraa’id ku qatbay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay uga digayso dadka Soomaaliyeed in ay iibsadaan dhistaan ama isku dayaan in ay sharciyaysataan xeryaha ciidanka XDS.
Wasiiru dawlaha ayaa sidoo kale tilmaamay in xeryaha guryaha iyo goobaha loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan ciidanka qalabka sida ay yihiin hanti Qaran sidaa darteedna aan laga ogolanayan in qof uu si gooni ah ugu tagri falo.
Maxamuud Macalin Nuur wasiiru dawlaha wasaaradda gaashandhigga ayaa dhanka kale ugu baaqay hay’adaha garsoorka dalka in ay iyana dhankooda mas’uuliyad iska saaraan sidii looga hortagi lahaa dadka isku daya in ay u samaystaan hantida Qaranka dukumentiyo been abuur ah oo ay ugu gambadaan in ay ku tagri falaan hanitada Qaranka.
Hadalkani ka so yeeray wasaradda Difaaca dalka ayaa ku soo beegmaya xilii dad fara badani ay deegaanno iyo gooba ganacsi ka samaysteen xeryo guryo iyo goobo ay leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo dawladda Soomaliyana ay ku hawlantahay dib u soo celinta hantida Qaranka.
abdi wahaab says:	October 17, 2012 at 2:56 pm	ha laga soo celiyo hantida ciidanka xooga dalka soomalia nin kaligiis qaadan karo ma jiro waana qalad wixii ummad wada leedahay nin baa qaadan kaligiisa ummada soomalida ah ma aqbali karto waana ceeb nin weyn iska dhisanayo wax uusan lahayn waana danbiile ciidanka qaean iyo dadka soomalida ah ka galey danbi waa in la maxkamadeeyaa hadal kaliya wax ma tarayo waa danbiile ninkaas dhistey wax ummadu leedahay ama difaaca qaranku leeyahay.
Reply »	Farxan c/lahi m/nur says:	October 17, 2012 at 7:39 pm	Adbu u mahad sanyahay wasiru dawlaha mst maxamud macalim nur iyo dhaman xds guryahoda&xeryahoda yalagu dag dagin wa libax yadi africa ha umalay nina in ay san idin ogayn xawarij ka dib wa adinka hadadna ka bixin maska ma cun tan oh sidad u cuntan ayam aham aham!!!
Reply »	maxamed c/lahi macalin says:	October 17, 2012 at 10:53 pm	sas oo kale ayaa rabaa in ay u shaqeeyaan wasaaradaha oo dhan sida wasirkan ku daysada
Reply »	jija says:	October 17, 2012 at 11:48 pm	MASHA ALLAH MAHADSANID MAS UULKAS HADALKA KA SO YERAY WA MID LAGA RABO MASULIYINTA KALE IN HANTIDI DOWLADA SO CELIYAN WAYO WAYAHAN DAMBE WAXA BADATAY IN DADKIBA EEY KU DADALAYAN IN EY JARDINOYINKI IYO MELIHI CAMKA AHA XEEBTI LIDO XEBTI JASIIRA ANIGA WAXEY ILA TAHAY XEEBAHA IN DOWLADA KACANTA KU HEYSO WAYO AMNIGA WADANKA AYA KU JIRA DOWLADA KU DADALA IN HANTIDU SO LABATO
Reply »	cumar muqtar says:	October 18, 2012 at 1:18 am	mashaa’allaaaah
Reply »	abdi madoobe says:	October 18, 2012 at 8:16 am	Waxaan la yaabay Sarkaal Sare oo Waayeel ah in uu ku doodaayo guri ciidamadu lahaayeen Cali Samatar ayaa ii saxiixay oo dhulkii ciidanka i siiyey shirkad private ahna oo ajnebi ah oo dibadda ka timidna wey ii dhistay. Ninkaas guriga dowladda wuxuu degenaa 1985kii oo shaqo loogu bedelay carabaha. Labaatan iyo laba sanno kadib ayuu warqado soo sameystay isagoo dad uu lacag siiyey u wakiishay in ay u soo dhacaan. Markii aan ku iri dowladda ayaa jirta ee orad waddanki aad oo hadii aad adigu guriga leedahay cadeymo geyso, wuxuu igu jawaabey marabo sidi yuusuf talan in leygu dilo dalkii, oo waxaan weydiiyey haddaba sidee guriga aad u dacwooneysid u degeysaa, wuxuu yiri markii la ii soo wareejiyo iib ayaan ku taagayaa. Haddaba waxaan dhihi lahaa kaas Soomali maahe wadanka yuusan dhicin
Reply »	Jabra ajay says:	October 18, 2012 at 2:36 pm	Waa sax lama ogola hantida dowlada ama xeryaha cxds adbad umahad santahay wasirkena maxamad macalin